Ny maha-zava-dehibe ny fananganana rohy
Ahoana no azonao ampiasana ny paikadin'ny fananganana marika amin'ny fananganana rohy manampy
Ny filana famoronana rohy avo lenta dia tsy mbola manan-danja kokoa amin'ny fametrahana ny tranonkalanao ho fahefana amin'ny niche anao. Ny fananganana rohy dia azo antoka fa miha sarotra kokoa rehefa manohy ny fanavaozana ny lalàny i Google, ary mitaky fitambaran'ny fomba sy hevitra ary fomba fanao samihafa hahatratrarana valiny mahomby.
Jereo manerana ny internet ianao dia ho tonga saina fa ny marika matanjaka dia mibahana amin'ny tranokala. Ilaina tokoa ny manomboka mahita ny fananganana rohy ho fitaovana tena ilaina amin'ny fanaovana marika, nefa amin'izany fotoana izany dia mahita ny fanaovana marika ho fitaovana manampy amin'ny fananganana rohy avo lenta. Ny fanatanterahana izany dia nahatonga ny olona maro hilaza fa ny fananganana rohy dia tena mitovy amin'ny tranon'ny marika. Ao amin'ny Semalt no ahafantarantsika fa ny fahamarinana dia ireto fitsipika roa ireto dia mifampitantana mba hanomezana fahombiazana amin'ny fandraharahana amin'ny ankapobeny. ¬
Inona no atao hoe fananganana rohy?
Ny fananganana rohy no fomba ahazoana na hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalan'ny tranokala hafa ao amin'ny Internet mankany amin'ny tranokalanao. Ny rohy iray (izay antsoina hoe rohy iray fotsiny) dia fomba iray hivezivezena eo amin'ny pejy amin'ny Internet.
Ireo milina fikarohana toa an'i Google dia mampiasa rohy ho an'ny fikorisana amin'ny tranonkala - izy ireo dia mitrandraka ireo rohy misy eo amin'ireo pejy samy hafa ao amin'ny tranonkalanao, ary mandady rohy misy koa eo amin'ny tranokala tsirairay.
1. Manampy amin'ny fanamafisana ny milina fikarohana izy: Misy fomba roa izay ampiasain'ny Google mampiasa rohy. Ny voalohany dia ny fitadiavana pejy vaovao ao amin'ny tranonkala ary ny faharoa dia ny fanampiana azy ireo amin'ny laharana pejy mifanaraka amin'ny valin'ny fikarohana azy ireo.
Isaky ny milina fikarohana ny tranokala dia afaka maka ny atiny sy manoratra azy ireo. Izao no fomba ahafahany mamantatra raha takiana ny takian'ny kalitao ny takelaka iray ary mendrika ny ho tonga toerana ho an'ny teny fanalahidy mifandraika amin'izany.
Ny votoatin'ny pejinao dia tsy ny hany mamaritra mamaritra izay manome toerana anao amin'ny Google TOP 100 - Ny Google dia mihevitra ihany koa ny isan'ny rohy mankany amin'ilay pejy manontany ny tranonkala hafa sy ny kalitaon'ireo tranonkala ivelany ireo. Midika fotsiny izany fa manana toerana ambony kokoa ianao eo amin'ny valin'ny fikarohana satria ny tranonkala avo lenta kokoa mifamatotra amin'ny anao.
Betsaka ireo mpikaroka mpikaroka no nanararaotra sy nanala tanteraka an'io hevitra io; noho izany, nanomboka nanary ny fanavaozana ny lalànany i Google mba hanakanana ireo fomba fanao ireo. Google aza dia namono ny tranokala marobe izay nanatsara ny tranokalan'izy ireo tamin'ny sazy Google nampatahotra. Mafy ny tranokala afaka miverina amin'ny sazy toy izany. Noho izany, tsara ho an'ny tompona tranonkala ny hampiasa ny foto-kevitry ny fananganana rohy.
Amin'izany fomba izany ny rohy avo lenta dia mahasoa ny tranokalanao amin'ny fanomezana toerana mahasoa anao amin'ny Google TOP, ny rohy ambany toetra dia mety manimba ny toerana misy anao amin'ny TOP. Ny tranonkala mifaninana sasany dia mety te hampiasa paikady SEO satroka mainty hidina anao mba ahafahan'izy ireo miakatra avo kokoa. Noho izany, tsara ho tsara ianao raha mailo hatrany hanakana rohy toy izany. Ao amin'ny Semalt , miambina hatrany ny mpanjifanay.
2. Manampy amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana fitadiavana : Ny rohy dia manampy anao hahatratra ny toeranao ao amin'ny Google TOP fa fantatrao fa afaka mitondra fiara amin'ny tranokalan'ny tranokala ihany koa izy ireo? Ny rohy avo lenta avy amin'ny tranokala mitsidika matetika dia afaka mitarika ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao. Ary raha ny tranonkalany dia misy ifandraisany amin'ny zavatra atolotrao, misy lesoka avo lenta fa ny fifamoivoizana ateraky ny rohy misy azy dia handoa ny mpanjifa.
Noho izany, ny fananganana rohy amin'ny tranokala hafa dia tsy ny isan'ny fivezivezena ihany no azon'izy ireo fa momba ny maha-zava-dehibe ny fifamoivoizany amin'ny zavatra atolotrao amin'ny tranonkalanao.
3. Manampy amin'ny fananganana fifandraisana: matetika , ny fananganana rohy dia hisy ny fidirana amin'ireo bilaogy sy tranonkala mifandraika amin'ny faritra misy anao. Mandritra ny ankamaroan'ny fotoana, manatona ireo olona mahery fo ianao mba hanampy amin'ny fampiroboroboana ny votoatinao vaovao ary ny antony lehibe dia ny fahazoana rohy avy amin'izy ireo izay azon'izay raisin'i Google ho antony iray hampahazoana anao bebe kokoa.
Ankehitriny dia manampy ny tombontsoa SEO, ny fanatonana ireo mpamaky mahery vaika ao amin'ny orinasanao dia afaka manampy anao hanorina fifandraisana maharitra miaraka amin'izy ireo izay hampitombo ny haavon'ny fahatokisan-tenanao eo imason'ireo mpanjifanao koa.
4. Manampy amin'ny fananganana marika: Rehefa atao tsara ny fanamboarana tranokala dia afaka manampy anao ho tompon'andraikitra amin'ny indostria amin'ny fanaovana ny marika anao tsy tapaka izy io.
Ny famoronana votoaty dia iray amin'ireo teknika fananganana rohy maro izay afaka manampy anao hampiseho ny mpanjifa ny fahaiza-manaonao, izay afaka manampy anao hanangana marika matanjaka.
Andao atao hoe manamboatra atiny mahafa-po ianao amin'ny alàlan'ny angon-drakitra mifandraika amin'ny orinasanao ary mamoaka azy an-tserasera, azo inoana fa hitombo ny lazany ao amin'ny indostrianareo. Avy eo, rehefa mifindra amin'ireo olon-kafa ao amin'ny orinasanao ianao mba hahazoana rohy, dia mampiseho ny fahaizanao ianao ary amin'ny fotoana iray dia manaparitaka ny votoatinao amin'ny mpihaino malalaka kokoa.
Toy izany koa ny fanamboarana ny tranokala afaka manampy amin'ny fananganana marika, misy koa ny paikadin'ny tranobe marika izay azo ampiasaina hanampiana amin'ny fananganana rohy mahomby. Andao hodinihintsika ny teknika sasany ampiasain'ny stratejika marika ary jereo ny fomba hampiasana azy ireo amin'ny fananganana rohy.
1. Ny niandohany, ny kalitao ary ny fikajiana ny votoatiny sy ny fifandraisana: Ny kalitaon'ny atiny sy ny fifandraisan-davitra no ilazanao hatrany amin'ireo mpizara ho mpanjifa ny tena hatsaranao ireo vokatra na serivisy atolotrao. Ataovy azo antoka foana fa isaky ny tsara indrindra foana ianao rehefa manary votoaty na mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny tranonkala na bilaogy hafa. Arakaraka ny ametrahanao votoaty tsy miovaova sy am-boalohany ary kalitao dia mihamatanjaka ny fahitan'ny tsenanao. Ary noho ny maha-manam-pahefana anao, dia mihombo hatrany ny rohy organika manomboka manomboka anao.
2. Fametrahana ny marika: Ireo mpahay paikady momba ny marika dia tsy manadino velively ny kendrena ireo mpihaino mety. Amin'izany fomba izany, ny kalitaon'ny hafatry ny marika dia mitovy lanjany amin'ny fikendrena ireo tranokala sy famoahana mety.
Isaky ny misy anao amin'ny fampielezan-kevitra momba ny fahazoana rohy dia manontania foana ny tenanao raha hitondra ny marika anao amin'ny toerana manokana tianao ny paikady hitadiavana azy amin'ny tsenan'ny kendrena azy.
Ny tolo-kevitry ny marika tsy manam-paharoa amin'ny marika dia tokony hananana toerana hatrany ao anatin'ny atiny rehetra sy ny fifandraisanao amin'ny Internet. Tokony hampiasa rohy ianao ho toy ny tetezana ho an'ireo olona liana amin'ny tolotra omen'ny marika anao. Noho izany, makà rohy avy amin'ny tranokala manana mpihaino anao, ary amboary mora aminy ny mahita anao.
Ny fanalahidin'ny fahazoana rohy izay manatsara ny fahitana ny marika sy ny fahombiazan'ny milina fikarohana dia ny fananana hafatra momba ny marika tsara amin'ny tranokala manam-pahefana mifandraika amin'izany.
3. Fifandraisana manorina: Manasa ny mpiara-miasa amin'ny indostria hanomezana votoaty ao amin'ny tranonkalanao ary manao toy izany ho azy ireo koa dia paikady famonoana matanjaka izay afaka manampy anao manangana rohy. Ny fiarahanao amin'ireo marika azo itokisana hafa ao amin'ny indostriao dia hanampy anao hahita fahatokisana sy azo itokisana kokoa.
Ny fomba tsara indrindra hanehoana ny fiarahanao fikambanana dia amin'ny alàlan'ny atiny izay atolotrao amin'ny mpihaino anao. Noho izany, zava-dehibe ny angatahin'ireo namanao mba hanoratra ao amin'ny bilaoginao, ohatra.
Azonao atao ihany koa ny mangataka ny hamerina mamerina ny sasany amin'ireo votoatiny taloha (izay ilaina amin'ny mpihaino anao) ao amin'ny tranonkalanao - ary mazava ho azy dia afaka manome tombontsoa manokana ho an'ny namanao ianao amin'ny famerenana indray ny votoatinao taloha.
Ny iray tombony amin'ity paikady fandresena ity dia ny fanamafisana ny fitambaram-pitokisana sy ny portfolio an'ny mpanoratra. Tombontsoa iray hafa ny handinihana fa satria ny votoatiny dia hampiroborobo amin'ny tamba-jotra sy ny andaniny roa dia samy hahazo fambolena organika sy mpanjifa / mpamaky vaovao. Manjary matanjaka eo amin'ny mason'ireo mpitsidika vaovao ny marika anao rehefa mahita ny fiaraha-miasa eo aminao sy ny marika itokisana hafa.
4. Tantara: iray amin'ireo hevitra matanjaka indrindra amin'ny fanaingoana marika. Ny marika lehibe rehetra dia manana tantara lehibe miraikitra amin'ny marika ary ny olona dia mazoto mifandraika amin'ny tantara.
Raha manana tantara tsy miovaova ianao, dia ho mora kokoa aminao ny hampiditra rohy sy teny fanalahidy ao anaty hafatrao ary hanampy anao hahatratra ny tanjonao ao amin'ny Google TOP izany.
5. Mamorona masoivoho marika: Mankatoky kokoa ny olona ny olona fa tsy ny marika. Mianara mampiasa ny marika anao amin'ny alàlan'ny fanomezana endrika azy.
Amboary ny olona izay hitondra ny sain'ny marika eo amin'ny Internet. Hanampy amin'ny fitantaranao ny tantaranao izy ireo, hanorina fahatsiarovan-tena ary hanamafy ny fomba fijerinao ny marika amin'ny fomba toa toa tsy mahomby. Ireo masoivoho marika ireo dia hamorona rohy izay hiteraka fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao ary hanatsara ny fahatongavanao ao amin'ny Google TOP ihany koa.
Ny fananganana rohy dia afaka manampy anao mamorona marika sy fananganana marika izay azo ampiasaina ihany koa hanampy anao amin'ny fananganana rohy avo lenta. Ny fananganana rohy sy ny fananganana marika dia ifamatorana mafy izay manenika foana ny foto-keviny. Tsy afaka manamboatra marika azo itokisana amin'ny Internet ianao raha tsy misy ny fananganana rohy sy ny mifamadika amin'izany. Semalt dia manana ny fitaovana tsara indrindra amin'ny indostria hanampy anao amin'ny tranobe rohy sy fananganana marika ho an'ny fahombiazan'ny orinasanao amin'ny ankapobeny.